Tsy azo ivalozana hono… ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Somary fandre matetika io teny io tao ho ao. Momba ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avo amin’ny raharaha fitarainana samihafa na mifanaraka amin’ny lalàm-panorenena na tsia. Teo no teraka ny filazana satria dia « lalàna tsy azo ivalozana » ny fanapahan-kevitra. Amin’ny tany demokratika anefa rehefa tsy azo ivalozana na ny lalàna na ny fanapahan-kevitra dia « tafahoatra » izay ary mety hanosihosy ny zo fototry ny olombelona. Antony ? Satria olombelona ihany no manapa-kevitra sy manao ny lalàna.
Ny hoe « tsy azo ivalozana » izany dia manjary teny mahery, toa mifono didiko fe lehibe ka mampatahotra. Mety ho « tafahoatra loatra » ny fampiasana azy eto amintsika. Fanairana ny saina no hiresahana azy eto satria « rehefa tafahoatra ny lalàna dia manjary manandevo ny olombelona ». Ny olombelona ihany anefa no manao, sy mampihatra ny lalàna izay tokony hanatsara ny fiainan’olombelona eo anivon’ny fiarahamonina, dia ny fiarahamonim-pirenena araka ny lalàna. Fifanarahana sy fifampidinihan’olombelona ny fanaovana lalàna. Izany no niteraka ny rafitra samihafa handinika ny fanaovana lalàna sy handinika ny fampiharana azy (Antenimiera, fitsarana samihafa).
Eto amintsika, roa no mety hisehoan’ny « tafahoatra ho didiko fe lehibe » : voalohany, toa misaraka ny politika sy ny fiarahamonina. Rehefa miresaka politika dia toa zavatra tsy mahakasika ny besinimaro izany. Toa sokajin’olona ihany no manao ny politika. Hadino fa ny « polis » dia ny « fiarahamonina ». Ny politika izany dia fandaminana sy fitantanana ny fiarahamonina ary ny politika no natao hikirakira ny lalàna satria ny « polis » na ny fiarahamonim-pirenena (politika) no mila arindra sy tantanina. Mifaningo-paka sy natao hifanohana ny politika sy ny lalàna, ny fiarahamonina sy ny politika ary ny fiarahamonina sy ny lalàna.
Rehefa sokajin’olona, na ampahan’olona vitsy na maro no mikirakira ny politika dia manjary sokajin’olona vitsy koa no mikirakira ny lalàna. Vokany, be no miaritra ny fampiharana ny lalàna. Eo no manahirana amin’ny resaka « tsy azo ivalozana » ho an’ny firenena te ho demokratika satria mety ho « toy ny kibay eny an-tanan’ny adala ny lalàna tsy azo ivalozana ». Mandeha any amin’ny tsy falehany ka mety mahafaty.
Raha toa « didiko fe lehibe na tsy refesi-mandidin’ny maro an’isa ny fampiharana lalàna » dia mivilana na ny resaka demokrasia na ny resaka politika na ny resaka lalàna. Tsy mifankahazo ary mety tsy hifampatoky intsony ny mpiara-belona. Dia miverina amin’ny fanjakan’antoko tokana indray isika, fony fitondrana sosialista. Mivadika ho « amboletra » ny hoe « tsy azo ivalozana » ; na manjary « tian-kano tsy tian-kano » satria « hevitr’olom-bitsy matanjatanjaka » ao amin’ilay mihevitra ho maro an’isa demokratika no lazaina ho « tsy azo ivalozana ». Ho zary didy jadon’antoko ny fandaniana lalàna ary tsy refesi-mandidy ny hevitra tokana terena hanjaka.
Tandindonin-doza ny fanajana ny zon’olombelona araka izany, ary ny zo fototra, toy ny fahalalahana na fanehoan-kevitry ny olom-pirenena no manjary iharan’ny tsy azo ivalozana. Mivadika ho jadona ny demokrasia rehefa manjaka ny tsy azo ivalozana ary fanararaotam-pahefana ny fanovana lalàna samihafa. Iharan’izany na rafi-panjakana toy ny antenimieran-doholona na fikambanana, toy ny asa fanaovan-gazety ; ary mivadika ho herim-pamoretana ho azy ny fitandroana ny filaminana.
Misy hiran’ny tanora katolika mifanohitra amin’io na manohitra an’io « Ny hery ve no entina handresena ny fanahy ? Lalàna ve no zary handemena izany saina ? Tsy ekena fa toherina ny tsindry hazo lena ; arodana raha toa ka manandevo ny lalàna ».